विश्वभर तीन अर्ब २५ करोड ८५ लाख ७२ हजार ८९२ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइयो – Nepal Japan
विश्वभर तीन अर्ब २५ करोड ८५ लाख ७२ हजार ८९२ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइयो
नेपाल जापान २३ असार १७:१४
विश्वभर तीन अर्ब २५ करोड ८४ लाख ५९४ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका दश देशको तथ्याङ्हरु यस प्रकार रहेका छन् ।
चीनमा एक अर्व ३१ करोड ८४ लाख १७ हजार डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । भारतमा ३६ करोड १३ लाख २३ हजार ५४८ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । अमेरिकामा ३३ करोड २ लाख १४ हजार ७३२ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । ब्राजिलमा दश करोड १३ लाख ९४ हजार ६५० डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध लगाइएको छ ।
बेलायतमा सात करोड ९९ लाख ७० हजार २ डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाइएको छ । जर्मनी सात करोड ७८ लाख ८२ हजार ४१४ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । फ्रान्समा पाँच करोड ७२ लाख ६९ हजार १५८ डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाइएको छ । इटाली पाँच करोड ६१ लाख ५६ हजार १०८ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ ।
टर्कीमा पाँच करोड ४६ लाख ५६ हजार १५ डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाइएको छ । जापान पाँच करोड ८ लाख ७० हजार ९६३ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ ।
भारतमा थप दुई लाख ७१ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित
तालिबान सत्ता कब्जापछि अफगानिस्तानमा बल्ल खुल्यो एटीएम सेवा
धेरै ‘बुस्टर डोज’ दिँदा प्रतिरोधी क्षमतामा असर पर्नसक्ने
इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्न घरबासदेखि पदयात्रा
४ माघ १७:०१
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति, मिति तोक्ने बाँकी
४ माघ १६:२०
मन्दिरको भेटीबाट विद्यालय सञ्चालन
४ माघ १६:१४
४ माघ १५:४०
४ माघ १५:२९
३. मधेसी महिलाबाट पहिलो डिआइजी बनाएकोमा खुसीयाली
४. पर्यटनमन्त्रीको एक्सन : बतास समूह र भेषनारायण दाहाललाई कारबाही गर्न पत्र
५. अमेरिका जाने लोभमा पर्दा…
६. कोरोनाका बिरामीबाट अस्पताल भरिँदै- अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने
७. जब आकाशमै विमानको ढोका खुल्यो